Mayelana neSino Stainless Steel - I-Huaxiao Metal Corporation Limited
ISino Stainless Steel Corporation Limited itshalwe yiHuaxia international Steel Corporation enqunyelwe. I-Sino Stainless Steel ingumkhiqizi osebenza kahle futhi othumela izinto kwamanye amazwe obhekene nokuthuthukiswa nokukhiqizwa kwensimbi engagqwali, i-almuminium, i-carbon steel, i-GI, i-PPGI, nepayipi, ibha, i-fastener nezinye izingxenye zensimbi. Ihhovisi lethu eliyinhloko litholakala eShanghai ngokufinyelela okulula kokuhamba. Kumiswa ihhovisi legatsha lase-Hebei edolobheni laseTangshan. Yonke imikhiqizo yethu ihambisana namazinga ekhwalithi aphesheya futhi ayaziswa kakhulu ezimakethe ezahlukahlukene emhlabeni jikelele.
Ukumboza indawo engamamitha-skwele angama-4,000, manje sineqembu labasebenzi abangaphezu kwe-15 elibhekele kakhulu ibhizinisi lokuthekelisa, inani lokuthengisa lonyaka elidlula i-USD 80Milllon ngo-2018, isiyonke ingaphezu kuka-40,000 imikhiqizo yensimbi yethoni ethunyelwa kwamanye amazwe, futhi njengamanje ithumela i-100% ukukhiqizwa kwethu emhlabeni wonke.
Izikhungo zethu ezihlome kahle nokulawulwa kwekhwalithi enhle kuzo zonke izigaba zokukhiqiza kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende okuphelele. Ngaphandle kwalokho, thina namafektri esisebenza nawo sithole isitifiketi se-ISO9001, TS16949.
Ngenxa yemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye namakhasimende avelele, sizuze inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke efinyelela emakethe yethu eyinhloko eNyakatho Melika, eMelika Ephakathi naseNingizimu Melika, eYurophu, eMpumalanga Ephakathi, e-Asia.
Siyabonga ngokubuka kwakho